Mutungamiri weEquatorial Guinea, VaNguema, Votarisirwa Kusangana naVaMugabe
Mutungamiri weEquatorial Guinea, VaTheodoro Obiang Nguema vari kushanya muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika yeEquatorial Guinea VaTheodoro Obiang Nguema Mbasogo vakasangana nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa pavakazeya nyaya dzekusimbaradza kudyidyana pakati peZimbabwe nehurumende yekuMalabo.
Vachitaura nevatori venhau paState House nezuro manheru mushure memusangano wavakaita nemutungamiri weEquatorial Guinea, VaTheodoro Obiang Nguema Mbasogo, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakati hapana zvitsva zvavakazeya naVaMbasogo munhaurirano dzavakaita kunze kwekungosimbaradza hukama hwagara huripo pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea vasati vatora matomhu kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
VaMbasogo vakaudzawo vatori venhau kuti kudyidzana pakati peZimbabwe nehurumende yavo kucharamba kuchienderera mberi zvisinei nekuti Zimbabwe yave nemutungamiri mutsva.
VaMbasogo, avo vaitaura vachiturikirwa, vakati hurumende yavo iri kutsigira zvirongwa zviri kuitwa naVaMnangagwa zvakanangana nebudiriro yenyika.
Vachiturikirwa, VaNguema vakati parwendo rwuno vakanga vasina zvitsva zvavakauya kuzotaura asi kungosimbaradza kudyidzana kwagara kwagara kuripo kuitira kuti vasimudzire nyika dzavo dzose dziri mbiri.
Zvichakadai, VaMbasogo vakatarisirwa kuita musangano naVaMugabe, avo vavaidyidzana navo zvikuru vasati vatorerwa masimba ehutongi naVaMnangagwa zvakakonzera kuti pasave nekuwirana pakati paVaMugabe naVaMnangagwa. Musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kumba kwaVaMugabe kuBlue Roof kuBorrowdale mangwanani ano.
Zvichakadai, vane ruzivo nezviri kuitika mukushanya kwemutungamiri weEquatorial Guinea vanoti VaMbasogo vatumwa nemashoko kuna VaMugabe abva kuna VaMnangagwa ane chekuita nekuti VaMugabe naVaMnangagwa vayanane pakubvutirana kwavakaita masimba.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaMalvern Mkudu, avo vanoshanda vakazvimirira, vanoti havaone VaMbasogo vachikwanisa kuita mutongi gava pakati pevaviri ava. VaMugabe naVaMbasogo vane hushamwari hunobvira kure uye VaMbasogo vakambobatsirwa naVaMugabe masoja emuno paakabata ndege yaiva nevanhu vainge vakatakura zvombo zvekunopidigurisa hurumende yaVaNguema kuMalabo.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe, VaTjenesani Ntungagwa.
Vapedza kusangana naVaMugabe, VaMbasogo vakatarisirwa kusangana zvakare naVaMnangagwa vasati vaoneka kudzokera kunyika kwavo nhasi wakare. Kupinda munyika kwakaita VaMbasogo nezuro kwakananganawo nekusvitsa chidimbu chepakati chegore kubva pakagadzwa VaMnangagwa semutungamiri wenyika munaMbudzi gore rapera.